အဆိုးဆုံး ယုံမှားမှုများ – Gentleman Magazine
စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အံ့ဩစရာကိစ္စတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အဆိုးမြင်ယုံကြည်မှုတွေဟာ သင့်အောင်မြင်မှုကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒိထဲမှာမှ အဆိုးရွားဆုံး ယုံကြည်မှု လေးခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဆိုးမြင်တာတွေထဲမှာ ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ ဆိုတာလောက် ဆိုးတာ မရှိပါဘူး။ လူတိုင်း အစမှာ ပြသနာတွေကို ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒိပြသနာတွေကို အဖြေရှာနိုင်မှ အောင်မြင်မှုရမှာပါ။ ခက်ခဲတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပထမဆုံး ယုံထားရပါမယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏ ပြောမိနေလား သတိထားကြည့်ပါ။ အဲဒိစကားကို သင့်အဘိဓာန်ထဲက ဖယ်ထုတ်ဖို့ ခုပဲကြိုးစားလိုက်ပါတော့။
၂. ကြောက်စရာဆိုတာ မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူးကွာ
စီးပွားရေးလောကဆိုတာ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ရှေ့ခြေတစ်လှမ်းတိုးဖို့ သတ္တိတော့ လိုမှာပါ။ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ နယ်ပယ်အသစ်ကို လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တိုင်း ကြောက်မိကြတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အဲဒိကြောက်ရွံ့မှုကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါတယ်။ သင် အခက်အခဲတစ်ခု ဖြတ်ကျော်ပြီးတိုင်း သင့်ကိုယ်သင် ချီးကျူးပေးပါ။ ကြောက်စရာကို ကျော်ဖြတ်မရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုလို သဘောမထားပါနဲ့။
၃. ဒါ သူ့ဘာသာ ဖြစ်သွားမှာပါ
မဟုတ်ပါဘူး။ သင် အဲဒါကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပါ။ ဒိအတွေးဟာ စီးပွားရေးအတွက် အကြီးဆုံးပြသနာဖြစ်တဲ့ အပျင်းကို ဦးတည်နေပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ အလိုလိုမရနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ကြိုးစားရမှာပါ။ ခုနက အတွေးမျိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ အောင်မြင်မှုရဖို့ အကူအညီပေးမယ့် သူတွေတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်က ထိုင်ပြီး အလုပ်အကုန်ပြီးသွားအောင် စောင့်နေလို့ မရပါဘူး။
၄. ငါက အားလုံးထက် ပိုတော်ပါတယ်
အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလွန်ပါနဲ့။ တချို့သူတွေက သူတို့ဟာ သူတို့ စီးပွားဖက်တွေထက် တော်တယ်ထင်ပြီး မာနနဲ့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်ချိန်မှာ ပါတနာကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ သူတွေကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရတာ မနည်းပါဘူး။ စီးပွားရေးဆိုတာ တခြားသူတွေကို နှိမ့်ချပြောဆိုနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတော်တွေ အများကြီးကပဲ လုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင် တွန်းပို့ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုအတွေးမျိုးထားရှိတာကို ဘယ်သူမှ လေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၅. ငါက အဲ့လောက် မတော်ပါဘူး
နံပါတ် ၄ အချက်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။ လူတော် တော်တော်များများဟာ အဲဒိအတွေးကြောင့် အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားရပါတယ်။ သူတို့ ကျရှုံးမယ်ထင်လို့ကို ကျရှုံးသွားရတာပါ။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက သင့်ကို အလုပ်ခေါ်ရင် ငါ အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ ကုမ္ပဏီကြီးဆိုတာကလဲ သင့်လို အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ သင် ထိုက်တန်လို့သာ သူတို့အထဲ ရောက်လာရတာပါ။ ကံကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေက သင့်လုပ်ငန်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး အားပေးလာတယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုရအောင် သင့်စိတ်ကို ထိန်းကျောင်းပေးဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။ သင့်ကိုယ်သင် အားပေးပါ။ အဲဒါဆိုရင် သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုဆိုတာ အိပ်မက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သငျ့အောငျမွငျမှုကို ဖကျြဆီးနတေဲ့ ယုံကွညျခကျြ ၅ ခကျြ
စီးပှားရေးလောကထဲမှာ ယုံကွညျမှုဆိုတာ အံ့ဩစရာကိစ်စတှကေို လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ လူတဈယောကျကို လုပျငနျးရှငျတဈယောကျအဖွဈ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို တိုးတကျအောငျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ အခွားတဈဖကျမှာတော့ အဆိုးမွငျယုံကွညျမှုတှဟော သငျ့အောငျမွငျမှုကို ဖကျြဆီးပဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒိထဲမှာမှ အဆိုးရှားဆုံး ယုံကွညျမှု လေးခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
အဆိုးမွငျတာတှထေဲမှာ ဒါမဖွဈနိုငျပါဘူးကှာ ဆိုတာလောကျ ဆိုးတာ မရှိပါဘူး။ လူတိုငျး အစမှာ ပွသနာတှကေို ကွုံတှရေ့ပါတယျ။ အဲဒိပွသနာတှကေို အဖွရှောနိုငျမှ အောငျမွငျမှုရမှာပါ။ ခကျခဲတဲ့ ပွသနာကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ ငါလုပျနိုငျပါတယျလို့ ပထမဆုံး ယုံထားရပါမယျ။ တဈနတေ့ဈနေ့ မဖွဈနိုငျပါဘူးလို့ ခဏခဏ ပွောမိနလေား သတိထားကွညျ့ပါ။ အဲဒိစကားကို သငျ့အဘိဓာနျထဲက ဖယျထုတျဖို့ ခုပဲကွိုးစားလိုကျပါတော့။
၂. ကွောကျစရာဆိုတာ မကြျောလှားနိုငျပါဘူးကှာ
စီးပှားရေးလောကဆိုတာ ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ လူတိုငျးမှာ ရှခွေ့တေဈလှမျးတိုးဖို့ သတ်တိတော့ လိုမှာပါ။ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျတိုငျးဟာ သူတို့ နယျပယျအသဈကို လုပျငနျးခြဲ့ထှငျတိုငျး ကွောကျမိကွတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ အဲဒိကွောကျရှံ့မှုကို ကြျောလှားနိုငျကွပါတယျ။ သငျ အခကျအခဲတဈခု ဖွတျကြျောပွီးတိုငျး သငျ့ကိုယျသငျ ခြီးကြူးပေးပါ။ ကွောကျစရာကို ကြျောဖွတျမရတဲ့ အခကျအခဲတဈခုလို သဘောမထားပါနဲ့။
၃. ဒါ သူ့ဘာသာ ဖွဈသှားမှာပါ
မဟုတျပါဘူး။ သငျ အဲဒါကို ဖွဈအောငျလုပျပေးရမှာပါ။ ဒိအတှေးဟာ စီးပှားရေးအတှကျ အကွီးဆုံးပွသနာဖွဈတဲ့ အပငျြးကို ဦးတညျနပေါတယျ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာ အလိုလိုမရနိုငျပါဘူး။ အလုပျကွိုးစားရမှာပါ။ ခုနက အတှေးမြိုးရှိတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှေ အောငျမွငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျသလောကျပါပဲ။ အောငျမွငျမှုရဖို့ အကူအညီပေးမယျ့ သူတှတေော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျက ထိုငျပွီး အလုပျအကုနျပွီးသှားအောငျ စောငျ့နလေို့ မရပါဘူး။
၄. ငါက အားလုံးထကျ ပိုတျောပါတယျ
အောငျမွငျဖို့အတှကျ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မလှနျပါနဲ့။ တခြို့သူတှကေ သူတို့ဟာ သူတို့ စီးပှားဖကျတှထေကျ တျောတယျထငျပွီး မာနနဲ့ ပွောတတျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ တဈခြိနျမှာ ပါတနာကောငျးဖွဈလာနိုငျတဲ့ သူတှကေို လကျလှတျဆုံးရှုံးရတာ မနညျးပါဘူး။ စီးပှားရေးဆိုတာ တခွားသူတှကေို နှိမျ့ခပြွောဆိုနဖေို့ မဟုတျပါဘူး။ လူတျောတှေ အမြားကွီးကပဲ လုပျငနျးကို တိုးတကျအောငျ တှနျးပို့ပေးနိုငျမှာပါ။ ဒီလိုအတှေးမြိုးထားရှိတာကို ဘယျသူမှ လေးစားမှာမဟုတျပါဘူး။
၅. ငါက အဲ့လောကျ မတျောပါဘူး
နံပါတျ ၄ အခကျြရဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျပါ။ လူတျော တျောတျောမြားမြားဟာ အဲဒိအတှေးကွောငျ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ အလှမျးဝေးသှားရပါတယျ။ သူတို့ ကရြှုံးမယျထငျလို့ကို ကရြှုံးသှားရတာပါ။ ကုမ်ပဏီကွီးတှကေ သငျ့ကို အလုပျချေါရငျ ငါ အရမျးကံကောငျးတယျလို့ မတှေးလိုကျပါနဲ့။ ကုမ်ပဏီကွီးဆိုတာကလဲ သငျ့လို အောငျမွငျဖို့ ကွိုးစားနကွေတဲ့သူတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာပါ။ သငျ ထိုကျတနျလို့သာ သူတို့အထဲ ရောကျလာရတာပါ။ ကံကောငျးလို့ မဟုတျပါဘူး။
လူတှကေ သငျ့လုပျငနျးကို ကွိုကျနှဈသကျပွီး အားပေးလာတယျဆိုရငျတော့ အောငျမွငျမှုရအောငျ သငျ့စိတျကို ထိနျးကြောငျးပေးဖို့ပဲ လိုပါတော့တယျ။ သငျ့ကိုယျသငျ အားပေးပါ။ အဲဒါဆိုရငျ သငျ့အတှကျ အောငျမွငျမှုဆိုတာ အိပျမကျ မဟုတျတော့ပါဘူး။
Previous: အချစ်နဲ့ မကင်းသူများအတွက် အရေးပါတဲ့ အမှန်တရားများ
Next: ဘာပဲ သင်သင် ခဏလေးနဲ့ တက်အောင်